Tim Cook wuxuu go'aansaday inuu la dagaallamo daadinta | Wararka IPhone
Shirkadda Apple waxay rabaan inay caqabadyada ugu badan ee suurtogalka ah geliyaan daadinta. Xaaladdan oo kale, ayaa bayaan internetka lagu faafiyay oo ay daabaceen warbaahinta sida 9To5Mac waxay muujinaysaa in Dagaalka Apple ee ka dhanka ah dadka daadiya macluumaadka xasaasiga ah hadda bilaabay.
Dareenkan, bayaankan loo diray dhammaan shaqaalaha Apple waa mid cad oo toos ah. Sida laga soo xigtay bayaankan, Apple waxay sameyneysaa wax kasta oo suuragal ah si ay u aqoonsato shaqsiyaadkaan waxayna hubisaa taas "Dadka siiya macluumaadka qarsoodiga ah laguma soo dhaweynayo shirkadda."
Dagaal adag laakiin waxay adeegsan doonaan dhammaan kheyraadka
Waxa ay la yimaaddaan qoraalka loo diray shaqaalaha ayaa ah in ay haystaan ​​shaqo adag oo ay maareyn karaan laakiin aan macquul ahayn. Apple waxay leedahay awood maaliyadeed iyo mid saadka oo ku filan si ay u daba gasho daadadkan suurtagalka ah iyadoo ay run tahay inay noqon karto dagaal adag oo la maareeyo, waxay u adeegsan doonaan dhammaan agabyada lagama maarmaanka u ah dagaalka.
Cook, wuxuu ka hadlayaa niyad -jabka shaqaalaha qaarkood si uu u arko in sir -doonka la mudnaan -siinayo laakiin arrimuhu waxay ku dambayn doonaan inay ka dhex daataan shaqaalaha. Dhinaca kale, waxa kale oo uu sheegayaa in niyad -jabkaani yahay mid la mid ah oo uu dareemayo marka uu arko wax qarsoodi ah oo la daabacay ... Wuxuu ku xaqiijinayaa bayaanka in uu adeegsanayo dhammaan agabyada ay gacmahooda ku haystaan ​​si loo garto kuwa shaandhaynaya xogtan iyo waxay ku dhammaataa iyaga oo uga mahadcelinaya dadaalka loo galay in la ilaaliyo xogtan iyo wax kasta oo ka sarreeya abuurista alaabta sida kuwa la daahfuri doono Jimcaha soo socda, September 24, adduunka oo dhan.
Waxaa suurtogal ah in baadi -goobka dadka ka dillaacay shirkadda uu sii ahaan doono ujeedka cad ee shirkadda sannadaha soo socda, way adkaan doontaa in la joojiyo laakiin Cook waa iska cadahay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah daadadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tim Cook wuxuu go'aansaday inuu la dagaallamo daadinta
Eebaha siddooyinkii: Ciyaarta dagaal hadda waxaa laga heli karaa App Store